कति पुग्यो सुनको मुल्य ? – Suchana Hub
कति पुग्यो सुनको मुल्य ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो साताको अन्तिम दिन शुक्रबार तोलामा प्रति तोला ९८ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आइतबार तोलामा ९८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।
गत साउन २३ गते सुनको मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च एक लाख तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । यस्तै गरि तेजावी सुन भने प्रति तोला ९७ हजार ९०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
शुक्रबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९८ हजार एक सय रुपैयाँ रहेको थियो । यसका साथै शुक्रबार प्रतितोला १३ सय ५५ रुपैयाँ मूल्य तोकिएको चाँदी आज १ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको छ ।
Next आज कति पुग्यो सुनचाँदीको मुल्य ?